China Carbide Rotary Burr SC Shape -Cylinder Shape amin'ny Radius End mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
Carbide Rotary Burr SC Shape -Cylinder Shape miaraka amin'ny Radius End
● Machining karazana metaly isan-karazany anisan'izany ny ≤ HRC65 vy mafy.
● Raha tokony ho kodiaran'ny emery kely, tsy misy loto.
● Fampitomboana avo folo heny noho ny fampiasana fitaovana tanana ary in-telo ka hatramin'ny dimy heny noho ny fampiasana kodiarana kely.
● Manana androm-piainana avo folo heny noho ny burs vy haingam-pandeha ary avo dimampolo heny noho ny kodiarana kely emery.
● Vitao ny machining karazana lava-bato isan-karazany.
● Esory ny burrs amin'ny casting, forgings ary ny fiparitahan'ny welding amin'ny fivoriambe weld.
● Zoro chamfering, vakana boribory na sodina amin'ny singa mekanika.
● Fandoroana na fandoroana ny fantsona.
● Fametahana ny fantsona impeller.
● Fikosehana ny lavaka amin'ny endrika marina.
Endriky ny cylinder miaraka amin'ny karazana faran'ny radius c C0313X03-25 3 13 3 38 X
F: Afaka mametraka baiko amin'ny lalana ve aho?
A: Eny, manaiky baiko fitsapana kely izahay.
Silver welding, Ity no fomba fanao mahazatra ho an'ny vokatra avo lenta.
teo aloha: Carbide Rotary Burr SB Shape -Cylinder Shape miaraka amin'ny End Cut
Manaraka: Carbide Rotary Burr SD endrika -Bola endrika